China 760-7x60W asacha bekee na mmetụta anya anya dugara n'isi na-ere ahịa na-emepụta ihe na ụlọ nrụpụta | Efe
760-7x60W asacha bekee na mmetụta anya anya butere isi na-ebugharị na ire ọkụ
7x60W beam asacha na mmetụta anya anya dugara n'isi na -ere ọkụ, otu mmepe akụkọ dị ka anya anụ 19x40w, wee kesaa otu ụdị ahụ, ahụ, teknụzụ ngwaahịa. Uru 7x60w nke nnukwu oghere nwere ike inye nsonaazụ ọkụ ka mma. N'ebe ezigbo anwụrụ ọkụ dị, ụfọdụ ndị ahịa kwudịrị na mmetụta otu ọkụ na -enwu dị ka ọkụ ọkụ 150W. Dị ka ngwaahịa ngwaahịa abụọ kacha ere ere karịa ọkụ ọkụ, ọnụọgụ ha na-emepụta kwa ọnwa nwere ike iru iberibe 800-1000. gbakwunyere nhazi anyị, teknụzụ, nkwalite usoro, ha nwere nkwụsi ike na arụmọrụ dị mma. Na -abụkarị na nnyefe ngwa ngwa, dịka oge ka anyị na -edobe ha ngwaahịa.
7x60W beam asacha na mmetụta anya anya butere isi na -ere ahịa
Njikwa otu onye nwere mmetụta pikselụ eserese, ọmarịcha ihe na mmemme yana ọnọdụ ọwa 7 DMX na -egbo mkpa mmemme nke ọnọdụ dị iche iche. Atọ na -adọ atọ na -enye ọnọdụ ziri ezi yana ngwa ngwa & arụ ọrụ dị jụụ. 33200 lux @5M n'akuku oghere dị warara na ogo 3. Nwee ahụmịhe bara uru na mmemme ọkwa dị iche iche buru ibu
Isi Iyi 7PCS 60W RGBW 4-IN-1 LED
3 °- 45 Celsius
540 °/630 Celsius
Ngosipụta: Ngosipụta agba agba 180-inch TFT nwere ihu 180
Nbanye data/oghere 3-pin & 5-pin XLR ntọala
Socket Ike PowerCon banye/pụta
Ogo nchedo IP20
Isi A rụnyere nko nke apịachi
Ikanam otu akara
Pụtara ìhè utịp nnukwu mmetụta
Sistemụ ngwa anya dị elu nke ọma, mmetụta ifuru mara mma yana mbugharị
Nchedo okpomoku ọkụ & Fan ọsọ ọsọ na -akpaghị aka dabere na isi ọkụ
NW 16.5 n'arọ
Ajụjụ: Kedu nke kacha ere gị?
RE: Ihe kpatara ngwaahịa ka ukwuu bụ nke anyị ji aka anyị na ọkụ nkeonwe anyị mere ya mere enwere ọtụtụ ngwa ahịa na -ere ọkụ n'ahịa. Ọ dabere na ụdị azụmahịa na ahịa ị na -elekwasị anya. Ọ ga -amasị m ịnye gị ndụmọdụ ọzọ ma ọ bụrụ na m mee ka m matakwuo ozi gbasara gị.
Ajụjụ: Ndị ọrụ ole n'ime ụlọ nrụpụta gị?
RE: Ihe dị ka ndị ọrụ 100 ka ọ dị, izu ọ bụla na-ezu ike otu ụbọchị, ndị ọrụ niile zụrụ nke ọma
Ajụjụ: Enwere m ike nweta akara m na ngwaahịa?
RE: ee, ọ dabere n'usoro nha
Nnyefe ụlọ ọrụ
Nke gara aga: 660-6*60W Pixels na-ejikwa osisi mbugharị mbugharị mbugharị mbugharị mbugharị enweghị mmachi enweghị oke
Osote: 1940-19*40W nnukwu anya anya na-akpụ akpụ na mbugharị na ntụgharị